सिमरा, १ पुस ः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धन उपमहानगरको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
सिमरास्थित थानीमाई वन उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिको १२औं वार्षिक साधारण सभालाई शनिवार सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख डा. पौडेलले उपमहानगरलाई प्रदुषणमुक्त बनाउनका लागि सामुदायिक वनहरुसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।
फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले काम गरिरहेको भन्दै नगर प्रमुख डा .पौडेलले थानीमाई सामुदायिक वन परिसरलाई ग्रिनपार्क बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउनका निम्ति सहकार्य गर्न उपमहानगर तयार रहेको बताए । ग्रिन पार्क निर्माणका लागि उपमहानगरले बजेट बिनियोजन समेत गसिकेको डा. पौडेलको भनाई छ ।
पर्यटन जोनमार्फत जीतपुरसिमरा उमहानगरलाई समृद्ध महानगर बनाउन आन्तरिक आयवृद्धि गर्ने डा. पौडेलले बताए । कार्यक्रम ब्रम्हकुमार बिजयराज सिग्देलले जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई स्वच्छ र ग्रिन सिटि बनाउनका निम्ति उपमहानगर र नगरबासीले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संस्थाले नगर प्रमुख डा. पौडेल, उपप्रमुख सरस्वती चौधरी, वडाअध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङ, तिलक श्रेष्ठ, जगन्नाथ घिमिरे, ईश्वर खत्रीलगायतलाई सम्मान गरेको थियो । कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष माधव त्रिपाठीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।